FOCAC သည် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် ထိရောက်မှုရှိသော စင်္ကြံ ဖြစ် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖိုရမ်(FOCAC) သည် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ထိရောက်မှု နှင့် ခိုင်မာမှုရှိသော စင်္ကြံ တစ်ခုဖြစ်ကာ ကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂရိကတိုက်သို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၁ ဘီလီယံစာ ထပ်မံဖြည့်စွက် ပေးအပ်သွားမည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သလို ၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး (FOCAC) တွင် အစီအစဉ် ၉ ခုအား ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါအောက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (FOCAC) ဖိုရမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများအကြား ကြုံတွေ့လာသော အခက်အခဲအတားအဆီးများကို အတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမည့် မျှဝေမှုကို သရုပ်ဖော်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် တရုတ်-အာဖရိက ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရေး ပင်မတန်ဖိုးကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ၌ လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် FOCAC ပေကျင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် တရုတ်-အာဖရိက မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ပုံစံသစ်ကို ထူထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်က တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် FOCAC ဂျိုဟန်နစ်စဘတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက တရုတ်-အာဖရိက ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် နှင့် ညှိနှိုင်းခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမိတ်ဖက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ FOCAC ပေကျင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဖက်စလုံးက တရုတ်-အာဖရိက ဆက်ဆံရေး အဆင့်သစ်တစ်ခုဆီသို့ တိုးမြှင့်ကာ ကံကြမ္မာအကျိုးတူမျှဝေအနာဂတ်တစ်ခုနှင့်အတူ တရုတ်-အာဖရိက အသိုက်အဝန်းအား ပို၍ ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် တည်ဆောက်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်များက နှစ်ဖက် အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များကို အာဖရိကတိုက်ရှိ ဒေသတွင်းအသိုက်အဝန်းများ နှင့် မိသားစုဝင်များက နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် သိရှိခံစားခဲ့ရသည်။
ဖိုရိမ် စတင်ထူထောင်ချိန်ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများသည် အာဖရိကတိုက်တွင် ရထားလမ်းအရှည် ကီလိုမီတာ ၁၀,၀၀၀ ၊ အမြန်လမ်းမအရှည် ကီလိုမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး ၊ တံတား အစင်း ၁,၀၀၀ နီးပါး ၊ ဆိပ်ကမ်း ၁၀၀ နှင့် ဧရာမလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု ၈၀ ကျော်ကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုများက အာဖရိကတိုက်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၀ ကျော် ၊ ကိုယ်ကာယအားကစားခန်းမ ၄၅ ခု နှင့် စာသင်ကျောင်း ၁၇၀ ကျော် နှင့် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၆၀,၀၀၀ ကျော်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
FOCAC သည် ၂၁ ရာစု၏ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အဖွဲ့အစည်းများအနက် ထိုးဖောက်မှုအရှိဆုံး ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ Fudan တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး နှင့် ပြည်သူရေးရာဌာန ပါရဂူတန်း (Ph.D.) ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Njumbe Smith က The Diplomat အွန်လိုင်းအင်တာနက်ဝက်ဆိုက်တွင် ၎င်း၏ အတွေးအမြင်ကို မကြာသေးမီက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ် နှင့် အာဖရိကအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် အပြန်အလှန် ကူညီထောက်ပံ့မှုသည် အာဖရိက၏ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက် ပေါင်းစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်ရုံမျှသာမက အာဖရိကတိုက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ကာ တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အခင်းအကျင်း ပေါင်းကူးတံတားတစ်စင်းကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်သည့် ၆၅ နှစ်မြောက်အခါသမယဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သော ၆၅ နှစ်တာကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဖရိက နိုင်ငံများသည် နယ်ချဲ့ဝါဒ နှင့်ကိုလိုနီဝါဒကို ရုန်းကန်တိုက်ဖျက်ရာတွင် ချိုးဖျက်၍မရနိုင်သော ညီရင်းအစ်ကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် တွန်းလှန်ခဲ့ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးကို ရှေ့ရှုသည့် ခရီးရှည်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ကွဲပြားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဖရိကသည် ခေတ်သစ်တွင် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုနှင့်အတူ တရုတ်-အာဖရိက အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် သမိုင်းဝင်အစမှတ်၌ ရပ်တည်ခဲ့ရာ နှစ်ဖက်စလုံးအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ၊ လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရေး ၊ အစွမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး နှင့် ညီမျှမှု နှင့် တရားမျှတမှုကို လက်ကိုင်ထားရေးတို့မှာ လွန်စွာအရေးပါလှသည်။
တရုတ် နှင့် အာဖရိကသည် အစဉ်အမြဲ ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ FOCAC ဖိုရမ်သည် တရုတ် နှင့် အာဖရိကအကြား ခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုအတွက် သက်သေပြချက်ဖြစ်ပြီး လာမည့်သုံးနှစ်ကျော်ကာလတွင် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ခမ်းနားသော မှတ်ကျောက်တစ်ခု ၊ သစ်လွင်မှုဖော်ဆောင်ခြင်း နှင့် တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွင် ခိုင်မာသောတွန်းအား ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Xinhua Commentary: FOCAC effective platform for promoting fruitful China-Africa cooperation
BEIJING, Nov. 30 (Xinhua) — The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) has been proven to be an effective and robust means for promoting China-Africa cooperation that has seen fruitful results.
The FOCAC has been one of the most striking comprehensive strategic and cooperative partnerships of the 21st century, said Njumbe Smith,aPh.D. candidate in the School of International Relations and Public Affairs of China’s Fudan University, in an opinion piece recently published on The Diplomat website.
Solidarity and mutual assistance between China and Africa have not only consolidated Africa’s independent political status, but also enhanced Africa’s sustainable development capacity, presentingabright China-Africa friendship landscape.
China and Africa will always beacommunity withashared future. The forum, which had in the past witnessed the strong bond between China and Africa, will chartamagnificent blueprint for China-Africa cooperation over the next three years, and inject new and strong impetus into the China-Africa friendship. Enditem